खोपको विषयमा ध’म्की आएपछि सिरम इन्स्टिच्यूटका सीईओले परिवारसहित भारत छाे’डे – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियखोपको विषयमा ध’म्की आएपछि सिरम इन्स्टिच्यूटका सीईओले परिवारसहित भारत छाे’डे
खोपको विषयमा ध’म्की आएपछि सिरम इन्स्टिच्यूटका सीईओले परिवारसहित भारत छाे’डे
नयाँ दिल्ली । खोप आपूर्तिको विषयलाई लिएर निरन्तर द’बाब र ध’म्की आएपछि सि’रम इन्स्टिच्यूट भारतका सीईओ अदार पूनवालाले मुलुक छा’ड्नुभएको छ । बेलायती सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले द’बाब झे’ल्न नसकेर आफू परिवारसहित लन्डन पुगेको बताउनुभयो ।
पु’नवालाले खोपको सम्पूर्ण भा’र आफूमाथि आ’इपरेको र त्यो एकलैले गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँलाई केही समयअघि भारत सकारले सु’रक्षासमेत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । उहाँलाई श’क्तिमा रहेका केहीले निरन्तर द’बाब र ध’म्की दिएपछि सु’रक्षा प्रदान गर्ने निर्’णय भएको हो ।
उहाँलाई प्रहरी र ४–५ जना क’मान्डोले सु’रक्षा दिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । सि’रमले अ’क्सफोर्ड र ए’स्ट्राजेनेकाले विकास गरेको कोरोना खोप को’भिसिल्ड उत्पादन गर्दै आइरहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस –एउटी नर्स बे’होसजस्तै देखिन्छन् । दुईतिरबाट साथीहरूले आड दिइरहेका छन् । पीपीई सेटमा रहेका नर्सहरू थाकेको देखिन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको उक्त तस्वीर बाँकेस्थित भेरी अञ्चल अस्पतालका नर्सहरूको हो ।
‘तस्वीर भेरी अस्पतालको नर्सहरूको हो । नर्सहरूलाई रेष्ट गर्न वार्डनजिकै रुम बनाएका छौँ’, अस्पतालको सूचना अधिकारी डा. संकेत रिसालले भने, ‘डाक्टर, नर्स नै संक्रमित हुनुहुन्छ । आराम गर्दै बि’रामीकै उपचारमा खटिनुभएको छ ।’ भोक प्या’स नभनी संक्रमित भएर पनि को’भिड बि’रामीको उपचारमा खटिएका नर्सहरूको सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा भइरहेको छ ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलेसमेत फोटो सेयर गर्दै लेखेको छ, ‘आजको दिनमा हामी मिलेर ती सबै स्वास्थ्यकर्मीलगायत को’भिड– १९ विरुद्धको ल’डाइँमा अग्रपंक्तिमा रहनुभएका सबै जनाको सम्मान गरौँ, जसले आफ्नो जीवन नै जो’खिममा राखेर नेपाल होस् या अमेरिका अथवा संसारको अन्य कुनै भागमा अरूको जीवन बचाउने कार्यमा दिनरात नभनी ख’टिनुभएको छ । समस्त विश्वमा आइपरेको यो विपत्तिमा तपाईंहरू सबैको से’वाभाव र समर्पण अ’तुलनीय छ, धेरै धेरै ध’न्यवाद ।’
भेरी अस्पतालमा शनिबारसम्म ९० जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन् । ‘डाक्टर, नर्स, सहयोगी, अन्य कर्मचारी गरेर ९० जना संक्रमित भएका छन्’, डा. रिसालले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई नै परामर्श दिइरहेका छौँ । अस्पतालमै क्वा’टरको व्यवस्था गरिएको छ ।’
अस्पतालमा २ सय ७२ जना संक्रमित भर्ना भएको उनले बताए । ‘भर्ना भएका ८० प्रतिशत अक्सिजनमा छन् । भेन्टिलेटरमा ७ जना । स्थिति गा’ह्रो छ’, उनले भने, ‘कुरुवा नै संक्रमित छन् । तीन हप्ता आर्मी शा’सनको लकडाउन लगाउनुपर्छ । अनि मात्र कोरोनाको चे’न ब्रे’क गर्न सकिन्छ ।’
भारतको महाराष्ट्रमा संक्रमण फै’लदा नेपालमा अ’सर देखिएका र विद्यालय ब’न्द गर्न आग्रह गर्दा कसैले नमानेकाले आज यो स्थिति आएको उनी बताउँछन् । ‘पहिलेभन्दा कसैले मानेनन् । ल’कडाउन भनेको छ गाडी आएकै छन् । नाका खोल्ने कुरा चल्दै छ ।
दूरी कायम भएको छैन । क’डा ब’न्द नभएसम्म कोरोनाको चे’न ब्रे’क हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘भि’जिटर बि’रामीलाई खान दिन आउँछन् । बि’रामीबाट भि’जिटरमा स’र्छ । भि’जिटर बजारमा जान्छन् । बजारका पसलमा पुग्छ । पसलबाट घरघरमा कोरोना पुग्छ । ब्रे’क कसरी हुन्छ ?’